Ndọrọ Ndọrọ Ọchịchị Dubai na Azụmaahịa | Ọrụ - Nlekọta - Njikọ Amardeep Brar
Dubai History Politics na Business
Olee otú ịchọta onye nsụgharị Chinese na Dubai?
Mba ndị Arab na-adabere na mpụ, nke kachasị elu na nyocha nke ụwa
Akụkọ nke Dubai
Akụkọ nke Dubai Ọchịchị na azụmahịa
Ebe ọ bụ na 1833 ndị ọchịchị Al Maktoum na - achị achị chịrị Dubai. N'okpuru nduzi ha na-enwe ọganihu, Dubai abụrụla ọganihu ma ọ bụ ugbu a ka azụmahịa na njem nleta maka mpaghara nke si n'Ijipt gaa n'ala India, na South Africa ruo mba CIS.
Onye isi nke asatọ sitere na ezinụlọ Al Maktoum, onye isi ya bụ Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, onye na-achị Dubai si 1958 - 1990, duziri Emirate na ọmịiko na nghọta. Ọ ghọtara ihe dị mkpa iji gbanwee Dubai n'ime ụwa, obodo bara ọgaranya ọ bụ taa. Sheikh Rashid tinyere Akụkọ nke Dubai :
A na-akpọ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan na-arụ ọrụ dị mkpa n'igosi Federation nke United Arab Emirates.
Mgbe ọnwụ Sheikh Sheikh gbara na November 1990, Sheikh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum ghọrọ Onye Ọchịchị nke Dubai na onye isi oche na Prime Minista nke UAE, ọnọdụ ọ nọ na ya ruo mgbe ọ nwụrụ na January 2006.
Na January 4th 2006, Ọdịdị Ya Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ghọrọ onye ọchịchị nke Dubai mgbe ọnwụ Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum nwụrụ. N'okpuru onye ndú ya, Dubai na-aghọ ngwa ngwa n'ime otu obodo ukwu ndị dị n'ụwa. Onye isi ya bụ Mohammed Mohammed bụkwa onye isi oche na Prime Minister nke UAE.
Na 1st February 2008, HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ekwuwo okpukpu Prince nke Dubai. Ọ bụkwa onyeisi oche nke Executive Council nke Dubai. Ndị isi Rulers nke Dubai bụ HH Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum na HH Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum. HH Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum bụkwa Minista ego nke UAE.
Kedu ka Dubai si gbanwee oge?
Dubai gbanwere n'ụzọ dị ịrịba ama n'ime iri afọ atọ gara aga, ghọọ nnukwu ụlọ ọrụ azụmahịa na akụnụba dị ike ma dị iche iche. Dubai na-enwe ọnọdụ dị mma ma na-eje ozi dị ka nnukwu ụlọ ọrụ ọpụpụ na Middle East.
Ọ bụ obere ọnụahịa na arụmọrụ arụmọrụ na ihe ndị ọzọ magburu onwe ya, nlezianya ụwa na ụkpụrụ gọọmentị na-adọrọ mmasị ndị investors n'ụzọ dị ukwuu. Ihe ndị dị ka ahia, ụgbọ njem, njem, ụlọ ọrụ na ego egosiwo ọganihu na-aga n'ihu ma nye aka aku na uba iji nweta ọganihu dị ukwuu na mgbasawanye.
Iji nyere ndị nwere mmasị ịchọta nkọwa ndị ọzọ banyere akụ na ụba ahịa nke Dubai, a na-edepụta peeji ndị a site na data kachasị ọhụrụ maka akara aka na akụ na ụba. Ha nwere tebụl na Economic Statistics Statistics nke sitere n'aka "Dubai Socio-Economic Development Indicators" gụnyere ọtụtụ data dị ugbu a banyere akụ na ụba Dubai na ọha mmadụ. Ọzọkwa, ibe ndị ọzọ nwere njedebe nke ọnụọgụ anọ yana ozi banyere Investment na Dubai, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmahịa / azụmahịa.
Gịnị mere ị ga-eji họrọ Dubai dị ka ebe nchekwa ebe?
Ọnụahịa ụtụ ahịa nke Dubai na-enweta asọmpi ọnụahịa nke ọnụahịa, ahịa na uru gburugburu ebe obibi nke na-eme ka ihu igwe na-adọrọ mmasị ma dị mma maka ụlọ ọrụ na mpaghara ndị ọzọ. N'ezie, uru ndị a abụghị nanị na ọ bụ nanị Dubai ka mba Arabian Gulf na-eduga na-azụ ahịa azụmahịa na ọtụtụ obodo obodo, ma ha na-etinye ya na ihu nke ụwa, ike na emerging ahịa ahịa.
Dubai, ya na omenala azụmahịa ya na oge ochie ya, emeela ka a mara ya dị ka ogige ahia ahia nke Middle East, ọ pụtawokwa dịka isi ụlọ ọrụ re-export. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, Emirate aghọwo ebe dị mkpa maka ọtụtụ ndị na-eto eto, ọrụ na ọrụ bara uru:
Nzukọ, nzukọ, ihe ngosi
• Njem nleta
• Isi ụlọ ọrụ mpaghara
• Ịkwaga mpaghara, nkesa na ebe ndị e ji arụ ọrụ
• Ụlọ akụ, ego na mkpuchi
• Ụlọ ọrụ azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
• Nkwukọrịta Ozi na Communications
• Ịmepụta ìhè na ọkara
Ihe a niile mere ka ọ bụrụ na Dubai na-ekpo ọkụ, na-anabata ndị mmadụ, ụlọ ọrụ ụwa na akụrụngwa na atụmatụ ndị akụ na ụba na-emeghe ma na-emesapụ aka. N'ikpeazụ, e mere ka ọ hụ ọhụụ nke onwe ya, na-achọ ịkọba akụ na ụba ya ma belata ntukwasi obi ya na ụtụ mmanụ, Dubai amalitela ịzụlite n'ime ụlọ ọrụ azụmahịa nke mba ndị Arabian Gulf. Tụlee ihe ndị na-eme ka akụkọ a na-aga n'ihu na-aga n'ihu.
Uru dị iche iche nke Dubai
I. Ọnọdụ dị mkpa: Dubai bụ mpaghara mmiri dị n'etiti Far East na Europe na East-West axis na CIS na Africa na axis. Ọ bụ ọnụ ụzọ ámá nke ahịa nwere ike ịkọ dị ka:
• Large - Njikọ ahia nke ọma dị na ndị karịrị nde mmadụ 1.5 nọ n'ógbè dị agbata obi na-ekpuchi Osimiri Gulf, Middle East / Eastern Mediterranean, CIS, Central Asia, Africa na Asia sub-continent;
• -eto eto - Ọnụ ahịa nke mba Nile zuru ụwa ọnụ amụbawo na nkezi site na 11% kwa afọ ebe ọ bụ na 1988 na ọganihu akụ na ụba mpaghara na liberalization kwesịrị imelitekwu ọchịchọ;
• Ọgaranya - nnukwu akụ na ụba nke dị na mpaghara dị n'ime otu n'ime ógbè kasị baa ọgaranya n'ụwa ma nyekwa ya nnukwu ngwongwo nke ike dị ala na isi ala aluminum; nakwa n'akụkụ ndị isi na-ebute ngwaahịa ndị dị oké ọnụ ahịa nke agro-mbupụ;
• Di iche - dị iche iche ma dị mkpa mbubata chọrọ n'ịwa ohere maka ngwaahịa ndị na-ere ngwaahịa na ndị na-ere ahịa;
• Ịnweta - jere ozi site na ntanetị ụgbọ elu 120 ma jikọta ya site na ikikere 85 ka ọ bụrụ ihe karịrị 130 ụwa niile;
• Open - enweghị njikwa mgbanwe, nkwenye ma ọ bụ ahia ahia.
Amamihe nke onye na-anọghị na skis ya ma ọ bụ ederede ya, ihe kachasị mma bụ ndị dọkịta nwere akwụkwọ kachasị njọ nke ndị na-ere ọgwụ na-azụ iji ghọta.
Ike ọchịchị na akụ na ụba:
Dubai bụ akụkụ nke UAE nke bụ obere mpụ na mba ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akwụsi ike. Ọzọkwa, UAE na-enweta ego na ego. Ọ dị mma nke ọma, usoro akụ na ụba a ma ama na-enye nnukwu ụlọ ọrụ akwụmụgwọ na nnukwu ego. A na-ewu ụlọ ahịa na-ere ahịa na Emirate na-adabere na teknụzụ na-eduzi na usoro usoro iwu. Gọọmenti nwere ogologo oge, na-agbanwe agbanwe na-etinye aka na mgbasa ozi, usoro akụ na ụba na-emesapụ aka gụnyere nchedo ikike ikike akụ na ụba.
UAE na - erite uru site na mmekorita ulo oru mmekorita n'udo. N'ikpeazụ, e nwere usoro iwu doro anya, usoro iwu kwadoro maka azụmahịa na usoro doro anya nke iwu. Enwere ikike ikike nke ndị nwe obodo ruo 49% n'ihi na ụlọ ọrụ ndị a kpaara ókè guzobere n'ime Emirate nke Dubai na ruo 100% maka ụlọ ọrụ ndị ọkachamara, alaka na ụlọ ọrụ nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na-enweghị onwe ha. Ihe ndị a nile na-egosi na ọ bụ na Dubai ka e kenyere ndị na-arụ ọrụ na Moody's Investors Service ego maka ọkwa ego.
Ebe E Si Nweta: https://www.instagram.com/hhshkmohd
Mepee na Free Economic System:
Echebewo akụ na ụba Dubai na-emeghe ma nweere onwe ya iji dọta ndị na-achụ ego na azụmahịa. Ọchịchị gọọmenti na usoro iwu nke ọrụ ndị mmadụ na-eme ka ọ dịkarịa ala. Enweghị ụtụ isi kpọmkwem na uru ụlọ ọrụ ma ọ bụ ego nke onwe (ma e wezụga maka ụlọ ọrụ mmanụ nke na-akwụ ụgwọ ọnụahịa nke 55% na alaka nke ụlọ akụ si mba ọzọ na-akwụ ụgwọ 20% na uru netịpụtara na Dubai). Ndị ọrụ omenala dị ntakịrị na 4% na ọtụtụ nkwụsị, 100% repatriation nke isi obodo na uru a kwadoro, ọ dịghị nnyefe mba ọzọ, njikwa ahia ma ọ bụ ihe mgbochi na ọnụọgụ mgbanwe dị n'etiti US Dollar na UAE Dirham (US $ 1.00 = AED 3.678). Usoro iwu nlezianya na-enyere ndị mmadụ ohere ịbịanye ọrụ dị iche iche nke dịgasị iche iche n 'ọkwa niile n'ụwa.
Ngalaba Akụrụngwa na Ọrụ Nlekọta Ụwa:
Atụmatụ nzuzo nke Dubai na-etinye ego n'ịkwado njem, telefonikorita, ike na ọrụ mmepụta ihe emewo ka ọ nwee otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma n'ụwa; o nyekwaara ya aka ma oganihu ya na ahia ya n'uwa. Ụlọ ọrụ a na-egosi netwọk nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe asaa, otu ogige azụmahịa na atọ na-enwe ihe ịga nke ọma, mpaghara free specialties nke mba dị iche iche, ụgbọ mmiri abụọ nke ụwa, nnukwu ọdụ ụgbọelu mba na obodo a na-ere ahịa, ụlọ ọrụ okporo ụzọ nke oge a, nkà na ụzụ na-arụ ọrụ na ike na ihe ndị dị mkpa na-eme ka njikwa, mgbanwe, ịdabere na ya, ụgwọ na ụba kwesịrị ekwesị.
Ihe ndi ozo n'uwa bu ndi oru na-acho ndi ozo na ndi mba uwa, ndi ulo ahia, ndi isi ulo oru, ndi oru iwu, ndi isi ahia, ndi nyocha, ulo oru mgbasa ozi, nzuko mba na ogbako. ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ dị elu na ụlọ obibi, ụlọ ọgwụ mbụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ahịa na ebe ntụrụndụ. Ebe a na-emepe emepe: Dubai Airport Free Zone Jebel Ali Free Zone Dubai Media City Dubai Internet City
Ebumnuche na-akwụ ụgwọ:
Ụlọ ọrụ ụwa nke na-emepụta na Dubai nwere ike inweta uru bara ụba na-abaghị uru zuru ụwa ọnụ.
Ihe ndị bụ isi bụ:
Enweghị ikike njikwa mba ọzọ,
Enweghị ihe mgbochi ahia ma ọ bụ ihe ọ bụla,
Ọrụ ịbubata mbata (4% na ọtụtụ exemptions),
Ugwo oru oru ugwo - ndi oru ugbua bu ndi di iche iche na ndi mara ihe,
Ike elu ma ọ bụ ala ike akwụ ụgwọ,
Ezigbo ala na-akwụ ụgwọ,
Ịkwụ ụgwọ ego na-akwụ ụgwọ na ọnụ ọgụgụ dị elu nke mmiri,
Enweghị uru ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụtụ isi nke mmadụ (ma e wezụga maka ụlọ mmanụ na alaka nke ụlọ akụ ndị ọzọ). Ị nwere ike izo aka na tebụl n'okpuru ngalaba "Ụgwọ Ịme Ihe".
Ndụ Ogo Ogologo, Ndụ Ezigbo Ọnọdụ:
Ndụ Ogo Ogologo, Ndụ Ezigbo Ọnọdụ - Ebe E Si Nweta: https://www.instagram.com/hhshkmohd/
Ulo oru ndi di iche iche nke Dubai etinyewo ego n'ile ihe onwunwe dika ulo ala, ebe obibi na ndi ahia, ihe omumu na ihe ntiri. Tụkwasị na nke a, ọtụtụ ihe kpatara ya Emirate si ndụ dị elu na ọnọdụ ndụ dị elu na-eme ka ọ bụrụ ebe dị mma maka ọtụtụ ndị ga-eṅomi. Ihe ndị a na-agụnye ụlọ ọrụ dị mma, nnukwu mpụ, ebe dị ọcha, mmachi na ọdịbendị ọdịbendị, ụzọ ndụ nke ụwa, ọchịchị ọha na eze nke oge a, nnweta ụdị ahịa dị iche iche nke ọrụ na ọrụ, ihe dị nro na ịdị ọcha, ọdọ mmiri.
Usoro Omenala Azụmahịa Na-arụsi Ike na Nnukwu Nhọrọ nke Pụrụ Iche Business Partners:
Ahịa ụlọ ahịa dị n'ógbè ahụ nwere ọdịnala ogologo oge nke ọrụ ịzụ ahịa na mgbasa ozi azụmahịa zuru ụwa ọnụ na nkà na ụzụ na-emepụta ihe. Ndị ọchụnta ego nke obodo enweworị ahụmahụ na-aga nke ọma na mmekọrịta mba ụwa na nkwenye, ikikere, ụlọ ọrụ kwụrụ, na ntụgharị, na mpaghara dị iche iche nke aku na uba.
Nnukwu Ahịa ahia ahia na nnukwu ihe mepụtara na mbupụ na mbupụ mbupụ ọpụpụ:
Dubai na-akwado nnukwu azụmahịa netwọk nke mba ọzọ na-agbakwunye na 179 kwuo otú a na-enye onye na-emefu ego nnukwu nhọrọ nke ụlọ ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ maka iche iche nke ngwongwo na ọrụ. Dị ka onye so n'Òtù Na-ahụ Maka UAE, Dubai bụkwa akụkụ nke ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na mbupụ na mbupụghachi nke ụwa na Hong Kong na Singapore.
Ịzụlite ngwa ngwa n'ichepụta ngalaba:
Na-emepụta Gburugburu Ogologo Ogologo Ogologo, Ubu Obu Mbupu Ngwa: Enweela uru dị ukwuu n'ichepụta ihe bara uru na mbupụ nke ingots aluminom, ngwaahịa ndị e ji ígwè rụọ, textiles na uwe ndị a kwadebere, ọla edo na ọla, nri ndị a kwadebere, ndị na-eji ngwá ọkụ, mmanụ ala a nụchara anụcha, ọgwụ ndị na-adịghị na ngwaahịa ma ọ bụ ndị na-abụghị nke nwere ọla. Nkwado azụmahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụ na ụba na-eme ugbu a na-eme ka o kwe omume ntinye nke uru ndị a na ngalaba ndị ọzọ na-emepụta.
Kwe ka m webata Avion HR Solutions, ụlọ ọrụ na-eto eto na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ nke kwadoro ụkwụ ya na-elekwasị anya na mma & nnyefe ọrụ nke oge ya na ndị ahịa ya. E debanyere ụlọ ọrụ na April'2013 site na a otu ndị ọkachamara nwere ahụmahụ nke ọtụtụ iri afọ na nchịkọta, Media na Education Industry. Ọrụ anyị ugbu a na-agụnye nchịkọta na-adịgide adịgide, na-arụ ọrụ oge, ọrụ nlezianya, nhazi ebe obibi na oge okpomọkụ-Winter Stagery. Anyị na-enye ọrụ ndị a na Pan India. Anyị kwenyere na ọ bụghị nanị ndị mmadụ nọ na-enwe ọganihu kama ọ bụ na ọtụtụ n'ime nzukọ na-arụ oké ọrụ; ya mere anyị na-enye aka n'ịnye ndị ọkachamara na-emepụta ihe na-emepụta n'ogologo ọkwa niile nke nzukọ ahụ.
Dubai City Company ugbu a na-enye ezi nduzi maka ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.